Filimada Jake Gyllenhaal & Bandhigyada TV-ga - Waa inaad Daawataa! - Madadaalo
Filimada Jake Gyllenhaal & Bandhigyada TV-ga - Waa inaad Daawataa!
Jake Gyllenhaal wuxuu ku dhashay Jacob Benjamin Gyllenhaal waa jilaa Mareykan ah sidoo kalena soosaare filim ah. Wuxuu ka dhashay qoyska Gyllenhaal markay ahayd Disember 19, 1980. Waa wiilka uu dhalay mid ka mid ah agaasimayaasha ugu caansan Stephen Gyllenhaal iyo qoraa caan ah oo loo yaqaan Naomi Foner.
Gyllenhaal wuxuu adeegsaday sirdoonkiisa si uu magaciisa ugu helo filimada madaxa bannaan.Wuxuu bilaabay xirfadiisii ​​jilitaanka isagoo ilmo ah.Jake Gyllenhaal wuxuu helay dhowr filim oo dhalinyaro ah dhowaan.Filimkiisii ​​ugu horreeyay wuxuu ahaa City Slickers oo la sii daayay 1991. Markii dambe, wuxuu door ku lahaa filimada Aabihiis - Haweeney Khatar leh ayaa la sii daayay 1993 iyo Homegrown oo la sii daayay 1998.
Bandhigyadiisii ​​ugu fiicnaa waxay ahaayeen sida Homer Hickam bishii Oktoobar Sky oo la sii daayay 1999 iyo waxqabad kale oo la yaab leh oo uu sameeyay wuxuu ahaa dhalinyaro maskaxiyan ku dhibaataysan Donnie Darko oo la sii daayay 2001.
'Darbiga Badda / Nolosha' - Jake Gyllenhaal
Jake Gyllenhaal Top Movies & TV Show List:
1. Maalinta Berri ah
Maalinta Ka Dambeysa Berrito waa filim fal-dambiyeed Mareykan ah oo la sii daayay qiyaastii 2004. Waxaa wada-qoray, agaasimay, soona wada-saaray Roland Emmerich.Filimkan wuxuu ku saleysan yahay buugga The Coming Global Superstorm oo la daabacay 1999 waxaana qoray Art Bell iyo Whitley Strieber.
Filimkan wuxuu muujinayaa saameynta masiibo ee cimilada ka dib carqaladaynta Waqooyiga Badweynta Atlantik. Waxay ku saabsan tahay xaaladaha cimilada daran ee ka dhacay qaboojinta adduunka taasoo u horseedeysa da 'baraf cusub.Maalinta Ka Dambeysa Berito waa mid ka mid ah filimada ugu qosolka badan iyo waxqabadka ugu qosolka badan ee Jake Gyllenhaal waligii muujiyo. Inta badan go'aannada jilayaasha iyo Jake uu ku gaaro filimkan waa uun wax lagu qoslo.
Waxaa haga Tom Ford - Waxay muujineysaa nolosha u dhaxeysa haweeney maalqabeen ah dhacdooyinka ay ka aqrinayso sheeko uu qoray ninkeedii hore.Susan waxay ka heshay sheeko ninkeedii hore waxayna u aragtaa inay tahay mid aad u adag. Markay aqriso sheekada, waxay ku qasbeysaa inay wajahdo xaqiiqooyin badan oo qalqal galinaya nolosha guurkooda.
Waa sheeko aad u qallafsan oo ku saabsan jacaylka iyo booska ay dadka ugu rogaan jilayaasha mala-awaalka ah. Riwaayadda, gabadha aan faraxsanayn waxay noqotaa xaas faraxsan oo nin la khiyaaneeyey ayaa mar kale noqday dhibbane.
Netflix vs Hulu - Isbarbardhiga Dagaal
2. Buurley Brokeback
Filimka Brokeback Mountain ayaa laga yaabaa inuu yahay mid ka mid ah filimkii ugu fiicnaa Jake Gyllenhaal abid. Qofkasta oo aan wali arkin filimkan hubaal runtii wuxuu ku jiraa qasaaro weyn waxaana hubaal ah inuu seegi doono mid ka mid ah bandhigyadii ugu fiicnaa ee Jake.
Jake Gyllenhaal, waa wax lala yaabo heer kale marka loo eego dabeecad kale oo uu waligii ciyaaray iyo gabi ahaanba dadka filimka jecel oo dhan waa inay daawadaan filimkan shaki la’aan. Waa maskax afuufaysa.
Zodiac waa filim xiiso badan oo Mareykan ah oo la sii daayay qiyaastii 2007. Waxaa filimkan soo saare ka ahaa David Fincher. Waxay ku saleysan tahay buugga aan mala-awaalka ahayn oo isku magac ah oo uu qoray Robert Graysmith qiyaastii 1986-kii.Filimkani wuxuu ku saabsan yahay dilaayaasha taxanaha ah ee ugu halista badan taariikhda Mareykanka. Jake Gyllenhaal dabeecadiisu waa geesinimada sheekadan. Filimka 'Zodiac movie' waa midka dhab ahaantii iftiimin kara awoodda Jake Gyllenhaal ee muujinta dabeecad waallida ah.
Filimka 'Zodiac' wuxuu helay faallooyin badan oo wanaagsan oo ay ku jirto ammaanta qoritaankiisa, jilaynta iyo sidoo kale hagida.Filimkan waxaa loo magacaabay abaalmarino badan, oo ay kujirto abaalmarinta caanka ah ee Saturn ee waxqabadka ugu fiican ama Filimka xiisaha badan.Zodiac waxaa loo doortay inuu noqdo filimkii 12-aad ee ugu weynaa ee la sii daayo qarniga 21-aad.
Sidee Loo Hawlgeliyaa Tijaabada Bilaashka ah ee 'Disney Plus'?
4. Dhamaadka Daawashada
Filimkan wuxuu ku saleysan yahay sheekada laba sarkaal oo LAPD ah oo isku dayaya inay ku badbaadaan waddooyinka dambiyada badan.Filimkan waxaa ka buuxa ficil sidoo kale xoogaa ilmo ruxeysa iyo daqiiqado cabsi leh. Jake Gyllenhaal wuxuu bixiyay wixii ugu fiicnaa, wuxuuna umuuqdaa inuu ku lumay dabeecada gabi ahaanba laga bilaabo bilawga filimka ilaa dhamaadka.
Waxaa lagu toogtay qaab dukumiinti ah. Waxay daba socotaa nolol maalmeedka laba sarkaal oo bilays ah oo dhalinyaro ah oo ku nool LA maadaama ay yihiin lamaanayaal iyo sidoo kale saaxiibo.Waxay muujineysaa sida ay ula dhaqmaan xoogagga dambiilayaasha ah ee iyaga ka weyn.
Waxaa jiri kara riwaayado badan oo booliis ah. Laakiin, End of Watch waa wax aad u kala duwan.Dhaawacii End Of Watch waxaa loo sameeyay qaab aad u kala duwan. Waxaad ku oran kartaa nooc aad u macquul ah. Dhammaan jilayaasha filimkan waxay bixiyeen waxqabadkoodii ugu fiicnaa. Xaqiiqdii waan kugula talin doonnaa filimkan adiga.
Donnie Darko waa filim sheeko-xeeldheer saynisyahan Mareykan ah kaas oo la sii daayay 2001. Waxaa qoray oo Director ka ah Richard Kelly.Halkan Filimkan, Jake wuxuu soo bandhigay waxqabad muuqda oo muujinaya qaab ka duwan kuwii kale ee Jake horey u ciyaaray.Filimkan iyo waxqabadkiisa filimkan awgood, wuu weynaaday oo wuxuu noqday mid caan ah.
Waxaan dhihi karnaa Jake Gyllenhaal's Donnie Darko waxaa loo tixgelin karaa inuu yahay mid ka mid ah waxqabadkiisa ilaa maanta.Filimkan waxaa la duubay intii lagu jiray 28 maalmood.Sheekadu waxay ku saabsan tahay wiil dhalinyaro ah oo aan xasilloonayn maskaxdiisa oo uu soo booqday nin bakayle ah oo cabsi badan, ugu dhakhsaha badan waxyaabo qariib ah ayaa bilaabanaya inay dhacaan bilaha soo socda illaa Halloween yimaado.
Waxaa jira wax badan oo xiiso leh filimka inta lagu jiro muuqaal kasta. Qodobbada kala duwanaanta, dhacdooyinka, iyo sheekooyinka ayaa gabi ahaanba jahwareerin kara dhammaan daawadayaasha.
Nightcrawler waa filim xiiso badan oo Mareykan ah oo la sii daayay sanadkii 2014. Waxaa qoray oo director ka ah Dan Gilroy.Jake Gyllenhaal wuxuu ciyaaraa doorka Louis Bloom oo ah nin aad u go'aansan inuu nolol ka sameysto magaalada Los Angeles isagoo ah sawir qaade.
Dabeecaddiisa Nightcrawler waxay aad ugu egtahay qof waalan iyo xitaa qof murugo leh oo ka qosol badan.Jake wuxuu u qaadaa waalli heer kale. Sheekada filimkan waa mid aad u xiiso badan.
Ku ciyaarida dabeecada Dr. Johnny Wilcox oo ah marti-qaade Telefishan. Jake Gyllenhaal ayaa ciyaaray door ka duwan markan sidii hore uusan u ciyaarin door noocan oo kale ah.
Waxqabadkiisa halkan ayaa hoos loo dhigay. Waa inaad tan ku daawataa naftaada u arag naftaada sida wanaagsan ee jilitaankiisu u yahay.
Filimka Brothers waxaa la sii daayay qiyaastii 2009. Waa filim Mareykan ah oo riwaayad cilmi-nafsi ah oo uu si toos ah u waday Jim Sheridan sheekada waxaa qoray David Benioff.Runtii waa dib-u-habeyn filimkii Danmark ee 2004.Halkan filimkan - Walaalayaal, Jake Gyllenhaal wuxuu ku ciyaaraa doorka walaal taageero ah oo magaciisu yahay Tommy. Walaalkiis Sam wuxuu ku maqnaa dibedda.
In kasta oo Jake uu door kaliya ka ciyaaro filimkan. Laakiin, wuxuu hubiyay inuu sifiican uga ciyaaro dabeecaddiisa. Tommy, kaliya wuxuu doonayaa wanaagga walaalkiis wuxuuna doonayaa inuu ka caawiyo isaga xaalad kasta oo faraha ka baxda intaan qofna ogaan.
Waa filim aad u adag in la daawado waana mid aad u awood badan. Jilaayaasha jilaayaasha oo dhami way fiicnaayeen. Waxaad dhihi kartaa, waa mid ka mid ah filimada ugu hooseeya iyo sidoo kale filimo niyad jab leh wali. Dhamaadka filimku runtii wuu kaa careysiin doonaa xitaa wuxuu kaa dhigi doonaa oohin taasoo ah wax filimada inteeda kale aysan si fudud ku qaban karin.
Waxaan si aad ah ugula talin doonnaa filimkaan maadaama uu leeyahay wax walba oo filim kasta oo filim jecel uu ku raadin lahaa qaab dagaal / riwaayad. Waxaad ubaahantahay inaad sifiican u daawato shaqadan cajiibka ah maadaama ay kuu qalanto waqtigaaga.
Filimka Jake Gyllenhaal ayaa halkaan ku kasbaday qaabka jilaaga u muujiyo khasaaraha iyo sida uu isugu dayo inuu u maareeyo.Waxay muujineysaa nolosha feeryahan caan ah oo u dagaallama jidkiisa si uu gabadhiisa uga soo celiyo adeegyada ilaalinta ilmaha iyo sidoo kale inuu dib ugu soo celiyo xirfaddiisa xirfadeed ka dib markii dhacdo dhimasho ah ay ku tuurtay waddo ba'an oo halaag ah.
Dabeecadda Jake Gyllenhaal ee Billy Hope ayaa lagu qasbay inuu ka fariisto cayaartiisa kadib markii uu isha ka dhaawacmay. Dhawaan xaaskiisa Maureen (Rachel McAdams) ayaa markaa la toogtay ka dibna waxaa dilayaa feeryahanka soo socda ee walaalkiis.Jake Gyllenhaal gabi ahaanba waa mid la yaab leh dabeecaddiisa. Dadka intiisa badani si aad ah ayey u jeclaayeen oo ay doonayeen inuu u ciyaaro sida Batman maalin uun.
Jarhead, Jake Gyllenhaal wuxuu ciyaaraa doorka hore ee nolosha dhabta ah ee magaceeda la yiraahdo Anthony Swofford.Filimkan wuxuu isku dayayaa inuu dhinac kale oo dagaalka casriga ah ka soo qaado aragti gaar ah oo aan inta badan la soo bandhigin. Waxqabadka Jake Gyllenhaal waa mid cajiib ah.
Waxaa Director ka ah agaasime Sam Mendes oo waxay leedahay tageero fara badan.Haddii aadan filimka arkin, kani ma aha nooca dagaal ee caadiga ah ee filimka. Waa filim aad u kala duwan, waa inaad xaqiiqdii daawataa.
Jake Gyllenhaal waa mid kamid ah jilayaasha ugu caansan Hollywood. Wuxuu sameeyay filimo aad u tiro badan iyo barnaamijyo telefishan oo isaga magac weyn ku siiyay madadaalada madadaalada. Adiga kadib daawo filimadiisa waxaad ogaan doontaa sababta keentay inuu caan u noqdo. Wuxuu ciyaaray noocyo badan oo kaladuwan oo door ah xirfadiisa ciyaareed iyo inuu noqdo qof aad u daacad ah, dhamaan jilayaasha uu waligiis ciyaaray, wuxuu kaliya kufiicanyahay midkasta oo kamid ah. Waad daawan kartaa dhammaan filimaanta aan kor ku soo xusnay oo waxaad arki kartaa naftaada sida uu ugu fiican yahay waxqabadkiisa.
Ciyaaraha Sida PUBG - 4 Beddelka Ugu Sarreeya
daawato amarka online lacag la'aan ah
sida si ay u daawadaan videos youtube xakameynta
intee in leeg ayuu maxkamad free ardayga amazon
Spotify iyo xidhmo hulu ardayga
goobaha sharci darada ah ee lagu daawado filimada
youtube coupon tv code 2018
waa imovie fududahay in la isticmaalo